Iikati zine 7 ubomi - Isizathu sale ngxelo | Bezzia
USusana godoy | 15/06/2022 16:00 | Mascotas
Kutheni kusithiwa iikati zinobomi obu-7? Mhlawumbi uyilo nkcukacha kodwa uya kuzibuza ukuba kutheni ibinzana elinjalo. Ewe, namhlanje lixesha lokukwazi ukusombulula loo mathandabuzo asilindileyo. Ekubeni basoloko curiosities ukuthatha ingqalelo kwaye ukuba uhlala nekati enye okanye ngaphezulu, uya kuba nomdla ngakumbi ukwazi impendulo.
Iikati bezisoloko zinxulunyaniswa nezinto ezintle kuyo yonke imbali. Mhlawumbi yiloo nto kusoloko kukho izinto ezininzi ezinomdla ezibangqongileyo. Ngoko ke, akumangalisi ukuba kukwafuneka sithethe ngobo bomi busixhenxe sibukhankanya kakhulu xa sicinga ngabo. Fumanisa!
1 amandla akho omzimba
2 Iintsomi kumaXesha Aphakathi
3 inombolo yomlingo
4 ukuvela kwakhe ngokutsha
amandla akho omzimba
Iikati kuthiwa ziphila ubomi obu-7 ngenxa yesakhono sazo somzimba. Oko kukuthi, oku akuyi kubenza bakhululeke kuyo nayiphi na isifo, kodwa ngenxa yamandla abo omzimba, banokuwa kwiindawo eziphakamileyo ngaphandle kokulimala. Loo nto sihlala siyiva ngeekati ezihlala ezinyaweni iyafana nale siyikhankanyileyo. Asikuko ukuba eneneni ziye zahlala ngeenyawo, kodwa xa zithe zawa azenzakali ngokulula njengezinye iintlobo. Ukongeza ekubeni nesisindo esilula, kufuneka sikhankanye ukuba banomqolo oguquguqukayo kakhulu kunye nokulinganisela okukhulu. Xa bewa, baya kwenza uhlobo lwe-arch ngomqolo wabo, okwenza ukuba usebenze njengeparashute. Ngoku siyaqonda ngakumbi malunga nokufika ezinyaweni zakho kwaye ngaphandle kokulimala.
Iintsomi kumaXesha Aphakathi
Kuyinyani ukuba iikati bezisoloko zibandakanyeka kuzo zonke iintlobo zamabali. Kodwa kuwo wonke amaXesha Aphakathi ayesoloko eyinxalenye yamakhubalo. Nangona ayengafuni, ayesoloko enxulumana ngokusondeleyo nawo, kwanokungqongwe ngamagqwirha okanye amagqwirha. Mhlawumbi ngenxa nje yentsingiselo enomdla yazo. Kodwa nangona kunjalo, kubonakala ngathi phezu kwayo nje intshutshiso ayesoloko ekho. Ngoko kulapho kwathathwa khona ingcamango yokuba banokuba ngamakhubalo. Ukususela ekuthinjweni kwamagqwirha, nezilwanyana zehlelwa yinto efanayo. Kodwa ekubeni ingenguye wonk’ ubani owayecinga ngendlela efanayo, babebaninzi abantu ababamkelayo.
Ukongeza kule nto siyikhankanyileyo apha ngasentla, kongezelelwe inani lesi-7 kuyo nantoni na ngenxa yokuba babegqalwa njengesilwanyana ngaphezu kokuba ngcwele, akukho nto ifana nokunxulumanisa nenani elalinomlingo nalo. Ewe, ukuba ubungayazi ukuba yinombolo yesi-7 etsala amathamsanqa. Ukongeza kokuhlala unxulunyaniswa nomlingo. Ngoko ke, ukudibanisa oku kwizilwanyana. Kodwa lumka, kuba kwamanye amazwe azijongwa njengabantu abasi-7. Kumazwe ase-Anglo-Saxon kuthiwa ine-9, kuba ifanekiselwa nembali kaThixo uRa. owenza uhambo oluya kwilizwe elingaphantsi komhlaba ngendlela yekati waza wathatha ubomi kuzo zonke izithixo. Ngelixa abantu baseTurkey, iikati zinobomi obuncinci. Ke, oku kuya kuxhomekeka kwiinkolelo zendawo nganye.
ukuvela kwakhe ngokutsha
Sele sibona ukuba iikati zihlala zinxulunyaniswa nehlabathi lemilingo kunye neentsomi kunye namabali amnandi kakhulu. Ngenxa yesi sizathu, kwinkcubeko yaseYiputa ukuphindukuzalwa kwezilwanyana kwakucingwa. Lo nto iikati ziya kubuyela kwimo yomntu emva kokufikelela kukuzalwa ngokutsha kwesixhenxe. Ke, ukwazi konke oku, kulula ukuqonda ukuba kutheni iikati zinobomi obu-7. Ewe, konke oku kushiywe ngasemva kwaye ngokwenene banobomi obunye kuphela. Enye ekufuneka siyikhathalele kwaye sibanike konke okona kulungileyo ukuze bayonwabele ngokupheleleyo. Ke, khumbula ukuba amanyathelo okhuseleko kufuneka asoloko esekhaya lakho. Masingahendi ikamva!
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Mascotas » Kutheni besithi iikati zinobomi obu-7?
Pez, ingqokelela yezihlangu ezintsha ze-SS22 zikaNaguisa